တႈထုကဖဥအတႈရဲဥတႈက်ဲၚလ႕ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥတႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ | Radio Veritas Asia
မုႈလြံႈနံၚဖးဒိဥ လါအ့ျဖ့ဥ (၁)သီန႔ဥ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥ Archdioceses ဎဲႈခါလ႕ထံကီႈအဂၚတဖဥ ပဏပနီဥ၀ဲဒဥလ႕ အမ့ႈနံၚလ႕တႈကထုကဖဥန႔ႈလ႕ ကီႈပဎီၚစးထီဥလ႕ လါဖ့ၚဖူၚအါရံၚ (၁)သီန႔ဥ ပွၚဘဥသံလ႕အကဎၚ ကအိဥဒီးတႈမုဏတႈခုဥတႈဃူတႈဖိးဂီႈ.
Archdiocese of Cologne အတႈကြဲးအပူၚ တဲ၀ဲလ႕ ကီႈပဎီၚခဲအံၚ အတႈအိဥသးအ႕ထီဥဒီးအ႕ထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ. ပွၚခရံဏဖိဒီး တႈဘူဥတႈဘါလ႕အဂၚသ့ဥတဖဥစ့ႈကိး ဘဥတူႈဘဥ၀ဲဒဥ သုးပဒိဥဟံးန႔ႈဆူဥတႈစိတႈကမီၚ အတႈမၚဆူဥမၚဆွိးန႔ဥလီၚ.
ဒ္ Cardinal Charles Bo အတႈဃ့ထီဥအသိး The Cologne Archdiocese, the archdioceses of New York, Tokyo, German city of Regensburg အ၀ဲသ့ဥပဏပနီဥဃဏ၀ဲ လါအ့ျဖ့ဥ (၁)သီန႔ဥ လ႕အမ့ႈတႈထုကဖဥလီၚဆီအမုႈနံၚန႔ဥလီၚ.
ဒ္တႈကြဲးတႈပဏဖ်ါထီဥအသိး Cardinal Bo လ႕ဂ့ႈဂီႈအူအပူၚ ဃ့ကသကြံႈကညးထီဥ၀ဲတႈလ႕ ဆူဟီဥခိဥထီဘ့ဥ ဒ္သိးပွၚအိဥလ႕ တႈဃ့ထုကဖဥ လ႕တႈတပူၚဃီန႔ဥလီၚ.
တႈဃ့ထီဥလ႕ တႈကထုကဖဥတႈအဂီႈအံၚ ဖဲ လါမးရွး ၁၅သီန႔ဥ Cardinal Woelki of Cologne ကြဲးဆွ႕၀ဲဒဥတႈထုကဖဥ ဒီးတႈအံၚမ့ႈတႈမၚထြဲန႔ဥလီၚ. Cardinal Woelki ကြဲး၀ဲ -မ္ကစႈဎြၚကမၚစ႕ၚကီႈပဎီၚ ဒီးကဒိးန႔ႈက့ၚ တႈမုဥတႈခုဥတႈသဘ့် ဒီးကဲထီႈကဒါက့ၚ ကီႈလ႕အပွဲၚဒီးတႈထူးတႈတီၚ လ႕ပွၚကီႈပဎီၚဖိတဖဥ ပဏကဖ႕အသးန႔ဥတက့ႈ. ဎကဃ့စ့ႈကိး ဎပွၚဘါဎြၚဖိတဖဥ လ႕ ကဃ့ဘါထုကဖဥန႔ဥလ႕ကီႈပဎီၚ အဂီႈန႔ဥလီၚ.
Bishop Rudolf Voderholzeer of Regensburg စ့ႈကီး ဃ့ကညးပွၚခရံဏဖိတဖဥ လ႕ကဃ့ထုကဖဥတႈလ႕ ကီႈပဎီၚထံဖိကီႈဖိလ႕အတူႈဘဥတႈကီတႈခဲသ့ဥတဖဥ ဖဲ မုႈလြံႈနံၚဖးဒိဥ ဒီးဆူညါမုႈနံၚတဖဥန႔ဥလီၚ.
Bishop Rudolf Voderholzeer တဲ၀ဲပွၚထံဖိကီႈဖိအါမး ခဲအံၚလ႕ကီႈပဎီၚပူၚန႔ဥ တႈလ႕အအိဥဒီးအီၚလ႕ အဘဥဃးဒီးအတႈအိဥမူတဖဥ ဘဥလီၚမူးလီၚမႈ၀ဲဒဥဂီႈမုႈ လ႕အမ့ႈအတႈအိဥမူယ တႈသဘ့်ယ တႈသီတႈသီလ႕ ကဒီသဒ႕အီၚယ အတႈလုႈအီဥသးသမူ န႔ဥလီၚ. ပတႈထုကဖဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥအဂီႈ လ႕ကအိဥဒီးတႈသးဆူဥ တႈမုႈလ႕ လ႕ကလဲၚခီဖ်ိ၀ဲ မဲးမုႈခိဥအတႈကီတႈခဲ ဒီးကအိဥဒီးတႈမုႈလႈဒိဥလ႕ခဲမဆ့ဥတႈအိဥအဂီႈန႔ဥ တက့ႈ.
ဒ္ Archdioceses ဎဲႈဘ့ဥ အတႈကြဲးဖ်ါ၀ဲအသိး အါန႔ႈဒ္ ပွၚထံဖိကီႈ (၅၀၀) ဂၚ ဘဥတႈမၚသံအီၚလ႕ ပဎီၚသုးသ့ဥတဖဥ လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚ တႈကစီဥပဏဖ်ါ၀ဲန႔ဥလီၚ.
Archbishop Tarcisio Isao Kikuchi of Tokyo သီခါကရ႕ႈခိဥစ့ႈကိး လ႕အခီဥထံး ဆွ႕၀ဲဒဥ အတႈထုကဖဥ ဆူကီႈပဎီၚသီခါကရ႕ႈခိဥသ့ဥတဖဥ အအိဥန႔ဥလီၚ. ဎအဲဥဒိးအိဥဒီးသုလ႕ဎတႈထုကဖဥအပူၚ ဃုဏဒီးကီႈပဎီၚအတႈအိဥဖွိဥ လ႕အမၚစ႕ၚ ပွၚဂံႈစႈတဖဥ ဒီး ဂုဏက်ဲးစ႕းလ႕တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.
ကီႈအမဲရကဥ သီခါကရ႕ႈခိဥစ့ႈကိး ဆွ႕၀ဲဒဥ အတႈဆ႕ဂ့ၚတႈကြဲး ဒ္သိး ကီႈပဎီၚကန႔ႈက့ၚတႈသဘ့်အဂီႈန႔ဥလီၚ.
Cardinal Timothy M. Dolan, archbishop of New York တဲ၀ဲလ႕ ပပဏပသးတဖ်႕ဥဃီဒီး ပါပါ ျဖဥစ့ဥစ္ ဒီးဎဒီပုႈ၀ဲသီခါကရ႕ႈခိဥလ႕အိဥလ႕ ကီႈအမဲရကဥတဖဥ ဒီးလ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥညါတဖဥ ဒီးပွၚသူဥဂ့ၚသး၀ါတဖဥ ကဃ့ဘါထုကဖဥန႔ႈလ႕ ကီႈပဎီၚ အတႈသဘံဥသဘုဥအံၚ ကကတ႕ႈကြံဏ၀ဲ ဒီးကန႔ႈဘဥက့ၚတႈမုဏတႈခုဥန႔ဥတက့ႈ.
ဖဲပါပါ ဟဲလ႕ကီႈပဎီၚပူၚ ဖဲ ၂၀၁၇ အပူၚ ဃ့၀ဲထီဘိဒ္သိးပွၚကမၚကတ႕ႈကြံဏ တႈမၚအ႕သီလ႕ကီႈပူၚန႔ဥလီၚ.
ကဲးသလံး တႈအိဥဖွိဥ ခိဥနႈလ႕ထံကီႈအဂၚသ့ဥတဖဥ ပဏဃုဏဒီး ကီႈကေီဥတဲဥယ South Korea တဖဥစ့ႈကိး အိဥဒီးတႈသးတဖ်႕ဥဃီ ဒီးပဏဖ်ါထီဥအကလုႈ ဒ္သိးသိး ဖဲကီႈပဎီၚ အတႈအိဥသးအဆ႕ကတီႈခဲအံၚန႔ဥလီၚ.
ဖဲလါတဘ့ဥအံၚအခီဥထံးန႔ဥ ကိးသလံးသီခါကရ႕ႈခိဥ Cardinal ၁၂ ဂၚ ဖဲကီႈအ့ရွ႕ဥအံၚစ့ႈကိး ကအိဥက့ၚဒီး တႈမုဏတႈအုဥတႈ မၚဘဥလိဏဖိးဒ့အဂီႈ ပတံထီဥစ့ႈကိး၀ဲလီၚ.
တႈအိဥဖွိဥခိဥနႈတဖဥ ဒီးထဲန႔ဥတပူၚ ဃီဟီဥခိဥဒီဖ်႕ဥစ့ႈကိး ပဏသူဥပဏသး၀ဲလ႕ တႈကဲထီဥသး လ႕အ႕ထီဥနးထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈလ႕ ပွၚထံဖိကီႈဖိလ႕ အအိဥ (၅၄) ကကြဲႈ ဒီးဖဲန႔ဥ ကဲးသလံးဘါဎြၚဖိ အိဥ၀ဲဒဥ (၈)ကလီႈဃဥဃဥန႔ဥလီၚ.
ပွၚက်ိဏထံတႈ - ပါဒိဥအီက႕ဥစတ့ရႊ.ဥ
St. James ဘါဎြၚကေိ ပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥထ႕ဖွိဥဒီးမၚ၀ဲ မ့လိဏဘဥန႔ဥဟံန႔ႈဒီး မ့ႈအိဥလံန႔ဥမၚဘူဥဖဲ ၁၂ သီ လါအ့ျဖ့ဥ ၂၀၂၁ အနံၚ
ပွၚမၚစ႕ၚသးကညီၚတႈအကရ႕ (Aid to Church in Need) ဃ့ကညး၀ဲ တႈထုကဖဥလ႕ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအဂီႈ
ပါပါ ဘဲနဒ့ဥစ္ အသးနံဥကပွဲၚထီဥ ၉၄ နံဥလီၚ. 12.4.2021
စီၚပၚဖးဒိဥဖံဥလံဥစ္ စူးကြံဏအသးသမူအဃိပါပါ ျဖဥစ့ဥစ္ဆွ႕ထီဥ၀ဲ အတႈသူဥအုးသးအုးအလံဏပရ႕. 12.4.2021